Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ
ကျန်မ အလာဂျီ အကြောင်း တစ်ခါမေးဖူးပါတယ်။ လမ်းညွန်မှုအတိုင်း Zyrtec cetirizine Hydrochloride 10mg ကို အမြဲ ဆောင်ထားရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဘာ Seafood မှ မစားလည်းပဲ၊ ၃ ရက် (သို့) ၄ ရက် တစ်ခါ လောက်ကို ဆေးသောက် နေရပါတယ်။ ပုံထဲအတိုင်း အဖု သေးသေး လေးတွေ စုပေါက်လာပြီး အကြီးကြီး ဖြစ်လာတယ်။ ခနွာကိုယ် အိုက်စပ်စပ် ဖြစ်လာရာ ယားတက်တယ်။ အရမ်းပူပြီး ခဏနေ မိုးရွာလို့ အေးသွားတာတို့၊ အပြင်ထွက် နေပူထဲသွားပြီး ခဏနေ Aircon ခန်းထဲ ရောက်သွားရင်တို့ အဲလို အချိန်တွေမှာလည်း ယားလာတက်ပါတယ်။ အဖုတွေက တင်ပါးမှာ စပေါက်တာ များပါတယ်။ ဒူးခေါင်းတို့ တစ်ဒေါင်ဆစ် တို့ကနေလည်း တစ်ခါတစ်လေ စထွက်တက်တယ်။ လည်းပင်း ပတ်လည်တွေမှာထွက်ရင် တစ်ညလုံး အိပ်လို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒီဆေးကို စွဲပြီးသောက်တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီပါသလား။ တစ်ခြားဆေး ပြောင်းသုံးသင့်ရင်လည်း လမ်းညွန်ပေးပါ။
(အလာဂျီ) ဆိုတာ ရောဂါ-လက္ခဏာတခု ဖြစ်တယ်။ ရောဂါ မဟုတ်ပါ။ ဘာလို့ဖြစ်လာရသလဲ ဆိုတာ ရှောင်နိုင်မှ မဖြစ်မှာ။ မတည့်တာနဲ့ ထပ်တွေ့ရင် ထပ်ဖြစ်မယ်။ ဘာနဲ့မသင့်လဲ မသိတာက များတယ်။ ဆေးနည်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက ကိုယ်နဲ့သင့်တာ ရွေးရပါမယ်။
Allergy medications ဆေးတွေဟာ မတည့်တဲ့ Allergens ကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တာကို တားပေးတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်စေတဲ့ Histamine (ဟစ်တမင်း) ဓါတ်ထွက်တာကို တားတယ်။ ဆေးတွေက Pills ဆေးလုံး၊ Liquids ဆေးရည်၊ Nasal sprays နှာခေါင်းပန်းဆေး၊ Eyedrops မျက်စဉ်း၊ Creams လိမ်းဆေးနဲ့ Injections ထိုးဆေး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဆေး အတော် များမျာကို ဆေးလက်မှတ် မပါဘဲ ဝယ်လို့ရတယ်။
Antihistamines (အင်တီဟစ်စ်တမင်း) ဆေး၊
1. Oral antihistamines စားဆေး-သောက်ဆေး = ရောင်တာ၊ နှာရည်ယိုတာ၊ ယားတာ၊ မျက်ရည်များတာ၊ အင်ပြင် ထွက်တာတွေ သက်သာစေတယ်။ အလွယ်ဝယ်ရနိုင်တာတွေက Loratadine (Claritin), Cetirizine (Zyrtec) နဲ့ Clemastine (Tavist) တွေ ဖြစ်တယ်။ Fexofenadine (Allegra) ကိုတော့ ဆေးလက်မှတ်လိုမယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အာခေါင် ခြောက်မယ်။ အရင်မျိုးဆက် ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Diphenhydramine (Benadryl) နဲ့ Chlorpheniramine (Chlor-Trimeton) တွေဟာ အိပ်ချင်မယ်။
2. Antihistamine nasal sprays နှာခေါင်းထဲပန်းဆေး၊ Azelastine (Astelin, Astepro) နဲ့ Olopatadine (Patanase) တွေကို ဆေးလက်မှတ်နဲ့ ဝယ်ရတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပါးစပ်ထဲ ခါးနေမယ်၊ ခေါင်းမူးမယ်၊ မူးဝေဝေနေမယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ အာခေါင်ခြောက်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ နှာခေါင်းပူနေမယ်၊ နှာခေါင်းသွေးယိုမယ်၊ ပျို့မယ်၊ နှာရည်ယိုမယ်၊ လည်ချောင်းနာမယ်၊ နှာချေမယ်။
3. Antihistamine eyedrops မျက်စဉ်း၊ Ketotifen (Zaditor, Alaway, others), Naphazoline (Visine-A, Opcon-A) တွေကို အလွယ်ဝယ်ရမယ်။ Naphazoline (Albalon), Emedastine (Emadine) နဲ့ olopatadine (Patanol) တွေက ဆေးလက်မှတ်လိုမယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = မျက်စိနီနေမယ်၊ မျက်ရည်ယိုမယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်။ contact lenses မျက်ကပ်မှန် တပ်ထားသူနဲ့ မသင့်ဘူး။
Corticosteroids (ကော်တီကိုစတီရွိုက်) ဆေးကတော့ ဆေးလက်မှတ်ပါဘို့ လိုမယ်။
1. Oral corticosteroids စားဆေး-သောက်ဆေး၊ ဥပမာ Prednisone (Intensol) နဲ့ Prednisolone (Prelone) ဆေး။ ဒီဆေးမျိုးကို ရေရှည် မပေးရဘူး ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေက ဆိုးတယ်။ Cataracts မျက်စိ-အတွင်းတိမ်၊ Osteoporosis အရိုးအားနည်း၊ Muscle weakness ကြွက်သားအားနည်း၊ Delayed growth ကလေးတွေ ဖွံ့ထွားမှုနှေးတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
2. Nasal corticosteroid sprays နှာခေါင်းထဲ ပန်းရတဲ့ဆေးကို နှာပိတ်၊ နှာခြေ၊ နှာခေါင်းယား၊ နှာရည်ယိုတာတွေ အတွက် သုံးနိုင်တယ်။ Fluticasone (Flonase), Mometasone (Nasonex), Budesonide (Rhinocort Aqua), Flunisolide (Nasarel), Triamcinolone (Nasacort AQ) နဲ့ Beclomethasone (Beconase AQ) တွေဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေက စားဆေးလောက် မဆိုးပါ။ Unpleasant smell or taste မခံချင်တဲ့ အနံ့-အရသာ၊ နှာခေါင်း အနေရခက်၊ နှာခေါင်းသွေးယိုမယ်။
3. Inhaled corticosteroids (စတီရွိုက်) ရှူဆေး၊ Flunisolide (Aerobid), Triamcinolone (Azmacort), Fluticasone (Flovent) နဲ့ Budesonide (Pulmacort) တွေဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ သိပ်မဆိုးပါ။ ပါးစပ် ပိုးဝင်တတ်တယ်၊ ချောင်းဆိုးမယ်၊ အသံသြမယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်။
4. Corticosteroid eyedrops (စတီရွိုက်) မျက်စဉ်း၊ Dexamethasone (Maxidex, others), Fluorometholone (FML, others) နဲ့ Prednisolone (Pred Forte, others) တွေ ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = မျက်စိ ဝေဝါးတတ်တယ်၊ ကြာရှည်သုံးရင် မျက်စိပိုးဝင်တာ၊ ရေတိမ်နဲ့ အတွင်းတိမ် ဖြစ်နိုင်တယ်။
5. Corticosteroid skin creams (စတီရွိုက်) လိမ်းဆေး၊ Eczema (Atopic dermatitis) နှင်းခူးနာလိုအတွက် သုံးတယ်။ အား သိပ်မပြင်းတာမျိုးကိုတော့ လက်မှတ်မပါဘဲ ဝယ်လို့ရမယ်။ Hydrocortisone (Cortaid) နဲ့ Triamcinolone (Kenalog) တွေ ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အရေပြား နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အရောင်ပြောင်းနိုင်တယ်။
Decongestants (ဒီကွန်ဂျက်စတင့်) ဆေးတွေကို နှာခေါင်းမှာ ခံစားရတာတွေကို အမြန်သက်သာဘို့ သုံးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အသက် သိပ်ကြီးသူနဲ့ သွေးတိုး ရှိသူတွေ မသုံးသင့်ဘူး။
1. Oral decongestants စားဆေး-သောက်ဆေး၊ Pseudoephedrine (Sudafed), Claritin-D ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = စိတ်ထဲ နေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်နိုင်တယ်၊ နှလုံးခုန်မြန်-မမှန်ဖြစ်မယ်၊ ခေါင်းမူးမယ်၊ အိပ်မရဖြစ်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ စိတ်ပူမယ်၊ လက်တုံမယ်၊ သွေးတိုးမယ်။
2. Nasal decongestant sprays နှာခေါင်းထဲ ပန်းဆေး၊ Phenylephrine (Neo-Synephrine) နဲ့ Oxymetazoline (Afrin) ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = နှာခေါင်း ခြောက်-ပူမယ်၊ နှာရည်ယို-နှာစေးမယ်။ စိတ်ထဲ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ နှလုံးခုန်မြန်-မမှန်ဖြစ်မယ်၊ ခေါင်းမူးမယ်၊ အိပ်မရဖြစ်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ စိတ်ပူမယ်၊ လက်တုံမယ်၊ သွေးတိုးမယ်။
3. Decongestant eyedrops မျက်စဉ်း၊ Tetrahydrozoline (Visine, Clear Eyes) ဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = မျက်စိနီရဲနေမယ်၊ ရေတိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
(မှတ်ချက်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပေမဲ့ သုံးနေကြရတယ်။)
Other allergy medications တခြားဆေးတွေ
1. Montelukast (Singulair) ဆေးလက်မှတ်လိုတယ်။
2. Cromolyn sodium (NasalCrom) အလွယ်ဝယ်လို့ရတယ်။
3. Mast cell stabilizer eyedrops = Cromolyn sodium (Crolom), Lodoxamide (Alomide), Pemirolast (Alamast) and Nedocromil (Alocril)
Immunotherapy (အင်မြူနို-သာရာပီ) ရောဂါပြီးစနစ်သုံး ကုသနည်း၊
Immunotherapy injections ထိုးဆေးကို ၃-၅ နှစ်ကြာ ထိုးရတယ်။ မတည့်တဲ့ဓါတ်ကို နည်းနည်းစီ ထိုးပေးတာ ဖြစ်တယ်။ ကြာတော့ ယဉ်ပါးလာမယ်။ ကိုယ်မတည့်တာ သိမှ ဖြစ်မယ်။
Emergency epinephrine shots အရေးပေါ် ထိုးဆေး၊ သိပ်ဆိုးတဲ့သူတွေကို Epinephrine ဆေးထိုးတယ်။ Self-injecting syringe and needle (Autoinjector) devices = Twinject, EpiPen နဲ့ EpiPen Jr. တွေက အရေးပေါ် အတွက် ဆေးထိုးရလွယ်အောင် လုပ်ထားတာတွေ ဖြစ်တယ်။ သွားလေရာ ယူသွားနိုင်တယ်။
• Allergic rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/08/allergic-rhinitis.html
• Allergy - Urticaria - Hives အင်ပြင် ထွက်ခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/urticaria-hives.html
• Allergy သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/05/allergy.html
• Allergy and Worm နာတာရှည် (အလာဂျီ) နှင့် သန်ကောင် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/chronic-allergies.html
• Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/05/allergy-medications.html
• Allergy Relief Kit (အလာဂျီ) ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးအိတ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/allergy-relief-kit.html
• Allergy Triggers (အလာဂျီ) ရစေတတ်တဲ့ အကြောင်းတရား (၁ဝ) ပါး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/03/10-common-allergy-triggers.html တွေနဲ့ တွဲဖတ်ပါ။